I-hygrometer njengedivayisi yokulinganisa umswakama | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ku-meteorology okuguquguqukayo kwesimo sezulu okunquma isimo sezulu kukalwa ngokuqhubekayo. Ukuhlukahluka okubaluleke kakhulu ingcindezi yasemkhathini, umswakama, imisebe yelanga, ukuqondisa namandla emimoya, njll. Ukuguquguquka kwesimo sezulu ngakunye kunikeza imininingwane ebalulekile ngesimo sezulu futhi kukuvumela ukuthi uqagele ukuthi isimo sezulu sizoba njani ezinsukwini ezimbalwa ezizayo.
Namuhla sizokhuluma ngakho i-hygrometer, idivayisi esetshenziselwa ukukala umswakama. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi isebenza kanjani nayo yonke into ephathelene nemininingwane engayinikeza ku-meteorology?
1 Izici eziyinhloko, umlando nezinsiza
2 Imiqondo edingekayo mayelana nomswakama
3 Izinhlobo ze-hygrometer
3.1 I-hygrometer yezinwele
3.2 I-hygrometer yokumunca
3.3 I-hygrometer kagesi
3.4 Iqinisa i-hygrometer
3.5 Ama-hygrometer edijithali
Izici eziyinhloko, umlando nezinsiza
I-hygrometer akuyona into edlula ithuluzi elisetshenziselwa ukukala izinga lomswakama emoyeni, enhlabathini nasezitshalweni. Siyakhumbula ukuthi umswakama inani lomhwamuko wamanzi emvelweni. Ukuze umswakama ugcwale, izinga lokushisa elifanele kufanele libe phansi. Ngale ndlela, umhwamuko wamanzi emoyeni uyajiya bese uletha amazolo.
I-hygrometer isetshenziselwa ukukala inani lomhwamuko wamanzi emoyeni. Kunezinhlobo eziningana zama-hygrometer ngokuya ngokusebenza kwawo, yize zonke zinenhloso efanayo.
I-hygrometer yasungulwa yi- Isazi sefilosofi saseFrance uGuillaume Amontos ngo-1687. Kamuva yathuthukiswa futhi yathuthukiswa yiFahrenheit maphakathi nekhulu le-XNUMX. Isebenzisa izinzwa ezibona futhi zikhombise ukwehluka kwezinga lomswakama, zombili igesi nomoya jikelele. Ezindala kakhulu zazakhiwe ngezinzwa zohlobo lomshini. Lezi zinzwa zinikeze izimpendulo ezintweni ezizwelana nokwehluka komswakama, njengezinwele zomuntu.
Izicelo zayo zibanzi kakhulu. Zisetshenziselwa kokubili ukongiwa kwemikhiqizo esengozini enkulu yokuswakama ngokweqile, ukwazi ukusondela kwezimvula ezingaba khona kanye nesimo sezulu esibi ngokujwayelekile, ukuba nenhlanzeko enhle ngokwazi izinga lomswakama emagumbini nasemakamelweni. Iphinde isetshenziswe ezinhlelweni eziningi zezimboni ezidinga umswakama njengokukhiqizwa kwezindwangu ezithile, iphepha nosilika.
Imiqondo edingekayo mayelana nomswakama
Ukuqonda ukusebenza okulungile kwama-hygrometer, kuyadingeka ukwazi eminye imiqondo yomswakama nokuthi isebenza kanjani.
Isibonelo, umswakama isihlobo Kungumqondo abantu abaningi abangacaci ngawo. Umhwamuko wamanzi wenziwa ngemisebenzi ehlukene yabantu futhi, ngokujwayelekile, yanoma yimuphi umuntu ophilayo. Emakhaya, umhwamuko wamanzi wenziwa ngemisebenzi yokupheka ekhishini, izihlambi, ukujuluka okuvela ezitshalweni, ukuphefumula, njll.
Lomhwamuko wamanzi okhiqizwayo umuncwa umoya kuye ngezimo zemvelo, okudala ukwanda kokuqukethwe umswakama komoya. Ngakho-ke, inani eliphakeme kakhulu lomhwamuko wamanzi elingangena emoyeni ngaphandle kokugcwala (okungukuthi, ukufingqa) kuncike ekushiseni kokuma. Umoya ufudumala, kulapho usekela umhwamuko wamanzi ngaphandle kokugcwala umswakama. Ukuze Umswakama ohlobene nenani lomhwamuko wamanzi emoyeni ngamaphesenti.
Omunye umqondo ohlobene nomswakama ophelele. Kuyinani lomhwamuko wamanzi eliqukethe imitha engama-cubic yomoya futhi livezwe ngamagremu ngemitha ngalinye lekilikhi. Ama-Hygrometer nawo ayakwazi ukukala iphuzu lokusuthisa kwemvelo ngokuya ngezinga lokushisa. Iphoyinti lokugcwalisa ubukhulu bomhwamuko wamanzi ongaba khona emanzini kuthempelesha ethile nengcindezi ngaphandle kovalo lwamanzi.
Ngokuya ngohlobo lokusebenza kwe-hygrometer nezimpawu abanazo, kunezinhlobo ezahlukahlukene.
Lolu hlobo lwe-hygrometer kwaziwa njenge-hygroscope. Ukusebenza kwayo kubaluleke kakhulu. Kuqukethe ukujoyina iqembu lezinwele eziqoqwe ngendlela yentambo. Izinwele ziphendula izinguquko ezahlukahlukene kumswakama obhaliswe emoyeni ngokujija noma ngokungavimbi. Uma lokhu kwenzeka, inaliti iyasebenza ekhombisa inani lomswakama endaweni, kepha engakwazi ukuyikhombisa ngamaphesenti. Ngakho-ke, ayikwazi ukukala umswakama ohlobene.
Lolu hlobo lwe-hygrometer lusebenza ngezinto ezithile zamakhemikhali ezi-hygroscopic ezinekhono lokumunca noma lokukhipha umswakama endaweni ezungezile, kuya ngokuthi yini ekhona. Izinto ze-Hygroscopic yilezo ezibopha amaconsi omphunga wamanzi futhi okuyizo ezakha imvula.
Isebenza ngama-electrode wesilonda esivundlile. Phakathi kwama-electrode amabili kukhona isicubu esifakwe kwi-lithium chloride exutshwe namanzi. Lapho kushintshaniswa i-voltage kusetshenziswa ama-electrode, izicubu ziyafudunyezwa futhi amanye amanzi ahlanganiswe ne-lithium chloride ayahwamuka.
Ekushiseni ngakunye kuyasungula ibhalansi phakathi kwenani lamanzi elihwamukayo ngokushisa indwangu nalokho okumuncwa umswakama wemvelo, ngoba iseduze ne-lithium chloride, into eyi-hygroscopic kakhulu. Njengoba isimo siguquka, izinga lomswakama wezemvelo lisungulwa ngokunemba okukhulu.
Le mitha isetshenziselwa ukuthola iphesenti lomswakama emoyeni. Ukwenza lokhu, isebenzisa izinga lokushisa lapho indawo epholishiwe ingcolisa khona okwenza ukuthi izinga lokushisa lehle ngokweqile.
Yizinto zesimanjemanje kakhulu ezikhona futhi zisebenzisa amasekethe kagesi ukuguqula ukwehluka kwamandla amancane okubangelwa ukwehluka kwezinye izakhiwo ezibonakalayo kube izinombolo eziboniswa esikrinini. Amanye amamodeli ala ma-hygrometer asebenzisa ezinye izinto impahla yazo ekhethekile oguqula umbala kuye ngomswakama we-ambient. Ngalokhu bangathola izilinganiso ezinembile zomswakama.
Njengoba ukwazi ukubona, i-hygrometer inokusetshenziswa okuningi kwizimo zezulu hhayi kuyo kuphela, kepha nasempilweni yansuku zonke yezimboni, amakhaya nezakhiwo eziningi. Kubalulekile ukwazi umswakama ozungezile nokuthi iyiphi indlela engcono kunokusebenzisa ama-hygrometer ukukala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinsimbi Zomkhathi » Konke odinga ukukwazi ngama-hygrometer